‘साधना अनलाइन ट्यालेन्ट हन्ट’को दोस्रो संस्करण शुरू, घरबाटै सहभागी हुन पाइने, तर कसरी ? – BikashNews
‘साधना अनलाइन ट्यालेन्ट हन्ट’को दोस्रो संस्करण शुरू, घरबाटै सहभागी हुन पाइने, तर कसरी ?
२०७७ भदौ २२ गते १७:२९ विकासन्युज
काठमाडौं । नेपाली सांगितिक क्षेत्रमा तीन दशकदेखि निरन्तर सेवारत साधना कला केन्द्रले अनलाइन गायन प्रतियोगिता ‘साधना ट्यालेन्ट हन्ट’को दोस्रो संस्करण शुरु गरेको छ । आयोजक केन्द्रले प्रतियोगितामा भाग लिनका लागि अनलाइन मार्फत रजिष्ट्रेशन खुला गरेको हो ।
केन्द्रका संस्थापक निर्देशक मिलन मोक्तानका अनुसार प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउनका लागि आफूले गाएको गीत र भिडियो असोज १५ गतेसम्म अनलाइन मार्फत पठाउनु पर्ने छ । पठाइएका गीतहरुमध्येबाट संगीत तथा भाषाविद्हरु डा. कृष्णहरि बराल, किशोर गुरुङ, दीप तुलाधरको एक विशिष्ट निर्णायक मण्डलले सुरुमा १ सय जना प्रतियोगीहरु छनोट गर्नेछ । त्यसमध्येबाट उत्कृष्ट १० जना प्रतियोगीहरु दोस्रो चरणका लागि छनोट हुनेछन् ।
यस्तै उत्कृष्ट दश जनामध्येबाट दर्शक तथा श्रोताहरुको ५० प्रतिशत र निर्णायकहरुले प्रदान गर्ने ५० प्रतिशत नम्बरको आधारमा विजेताको छनोट गरिनेछ । प्रतियोगिताको विजयी छनोट गर्ने चरणलाई राष्ट्रिय टेलिभिजन मार्फत प्रशारण गरिने संस्थापक निर्देशक मोक्तानले जानकारी दिए ।
नेपाल लगायत विश्वभरिबाट नै सहभागी हुन पाउनेहरुले आफूलाई मन पर्ने नेपाली गीतको म्यूजिक ट्रयाकसहित रेकर्ड गरेर ९८०१०२३५७६ ह्वाट्सएप नम्बरमा अपलोड गर्नु पर्नेछ । साथमा आफ्नो पुरा नाम, ठेगाना, गीतको बोल,गीतकार,संगीतकार,ओरिजिनल गायक(गायिका र फोन नम्बर समेत लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
प्रतियोगितामा भाग लिन ५ सय रुपैयाँ दस्तुर लाग्ने आयोजकले जनाएको छ । दस्तुर भुक्तानीका लागि नेपाल बंगलादेश बैंकमा रहेको साधना कला केन्द्रको खाता नम्बर ण्ण्ज्ञण्द्धद्दठद्दज्ञए मा पठाउनु पर्नेछ ।
काठमाडाैं उपत्यकाभित्र रहेका प्रतियोगीहरुले केन्द्रको कार्यालय कमलादी मोड पुतलीसडकमा फर्म भरेर दस्तुर बुझाउन सक्नेछन् । अन्य थप जानकारी साधना कला केन्द्रको अफिसियल पेज मार्फत लिन सकिने आयोजकले जनाएको छ ।
सामाजिक सञ्जालः फिलिङ ह्याप्पीले निम्त्याउँदैछ फिलिङ स्याड